FAMPAHALALANA SY SARY AN'NY COYDOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary an'ny Coydog
Alika An-trano / Alika Hybrid Coyote
Sacchetto the Coydog (alika anatiny / Coyote hybrid)
Ny Coydog dia tsy alika madio. Izy io dia lakroa eo anelanelan'ny alika sy ny coyote. Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Izay manana hybrid Coydog dia tokony mianatra momba ny fihetsika canine ary alao antoka fa manatanteraka ny sain'ny biby miaraka amin'ny maha-mpitondra entana matanjaka sy matoky azy amin'ny fotoana rehetra.
Anaran'ny Coydog hafa
Ny Coydog dia fifangaroana eo amin'ny coyote dia sy ny alika fiompy. Matetika ny coydogs dia manana maso manindrona be. Voalaza fa tsy dia milalao na tia olona izy ireo amin'ny ankapobeny. Izay mitazona ny iray amin'ireo alika ireo dia tokony ho mpitondra matanjaka 100%, matoky tena ary tsy miovaova. Ny olona malemy saina dia hahita olana. Ity olona ity dia mila olona mahatakatra ny fihetsika alika voajanahary ary hiara-hiasa amin'ny toetran'ny alika. Raha tsy misy olona manana saina matanjaka kokoa, tony nefa hentitra be dia be, dia hiafara amin'ny alika malaky manaikitra amin'ny toe-javatra mampatahotra izay ahatsapana fa misy fandrahonana, hatezerana na tahotra. Mety hiafara amin'ny toetra mampatahotra, saro-kenatra na matahotra izy ireo. Ny Coydogs dia tsy safidy tsara ho an'ny biby fiompy ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​satria ny ankamaroan'ny olona dia tsy manana fahalalana momba ny voajanahary kanine voajanahary sy / na tsy dia manana saina matanjaka haka ny iray amin'ireo biby ireo.
FANAMARIHANA: Ny sasany milaza fa angano an-drenivohitra i Coydog, ny sasany kosa mangataka ny tsy hitovizany. Zava-misy fototarazo io fa ny alika, coyotes ary ny amboadia dia afaka mifamofo, avy eo mamokatra zanaka lonaka, na izany aza ny resaka, ny fihodinan'ny fanambadiana amin'ireo karazany roa dia samy hafa: coyotes midira amin'ny hafanana eo anelanelan'ny volana Janoary sy Martsa ary manaova zanak'alika amin'ny Mey na Jona, raha ny ankamaroan'ny alika an-trano kosa manana ny zanany amin'ny ririnina. Ity teôria ity dia tsy azo adalana, satria ny karazana alika sasany dia mihinana hafanana indroa isan-taona. Ny sasany kosa milaza fa fahazarana ara-tsosialin'ny alika an-trano sy ny coyote ataovy tsy fahita firy ny fahafaha manao vady. bibidia coyotes Tsy dia hoe mety ho lasa sariaka alika an-trano izy ireo fa mihinana ny alika. Ny coyote vavy dia miditra amin'ny hafanana indray mandeha isan-taona. Ny isan'ireo tsirinaina coyote lahy dia mijanona na ambany be mandritra ny taona. Amin'ny lohataona dia miakatra mandritra ny 2 volana eo ho eo izy miaraka amin'ny tsingerin'ny hafanan'ny coyote vavy. Ny coyotes lahy dia fantatra fa mijanona amin'ny vady vehivavy iray mandritra ny vanim-potoana iray manontolo ary hita fa manampy amin'ny fikarakaran'ireo alika kely. Na izany aza, azo atao ny mampirafy ny coyote sy ny alika ao an-trano. Ohatra, raha misy coyote lahy mifanerasera amina alika vavy lehibe izay mafana ary tsy misy vehivavy hafa coyotes manodidina ho an'ny lahy mba hiaraha-miasa aminy, na raha alika vavy lehibe any an-trano no nifandray tamina coyote vavy tokana, dia azo atao ny mamokatra genetika sy teorika fako alika kely .
D.Jay the Coydog ( coyote / Heeler hybrid) eo amin'ny 6 volana eo ho eo - He maman'i D.Jay ny reniny ary ny dadany dia coyote .
Fanamarihana iray avy amin'ny tompon'i D.Jay 'Monina amin'ny 80 hektara izahay any Alberta. Eo afovoan-tany isika. Firenena ANDRIAMANITRA no iantsoako azy. Saika tsy misy tany sisa tavela toa ny eto amintsika manodidina satria maro ny fizaram-paritany misy trano manodidina ny 2 ka hatramin'ny 5 hektara no hatsangana. Ireo coyote dia very trano ao amin'ireo zana-tsokajy vaovao ireo ka mifindra amin'ny tany malalaka izy ireo izao. Manana coyotes betsaka izahay eto amin'ity faritra ity. Izy ireo dia hita amin'ny antoandro eny amin'ny tokotanin'ny olona, ​​izay tena tsy mahazatra amin'ny taranany. Ny hanoanana dia nahatonga azy ireo ho sahy kokoa amin'ny faritra misy antsika. Saingy eto Alberta, avela hanapoizina azy ireo ny vahoaka ary koa manana programa hifehezana ny vahoaka. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia fomba iray hamonoana ireo biby ireo ihany izany hahafahan'ny olona manafika ny toeram-ponenany. Fomba fijeriko ihany izany satria hiady hevitra amiko ny hafa fa ny coyotes dia zavaboary manan-kery mandavaka ny fako ary fantatry ny famonoana biby fiompy kely aza. Nahazo an'ity alika mahafinaritra ity isika (D.Jay) fony izy tokony ho 6 herinandro teo amin'ny mpifanila vodirindrina taminay, izay nahita ny vavy niaraka tamina lehilahy coyote. Lehibe niaraka tamin'ny zanakay 4 sy ny alika 4 hafa izy. Tena sariaka izy ary tsy mivadika amin'ny fianakavianay. Tsy miady amin'ny alika hafa izy fa manana ny hadisoany kely. Hatramin'ny alalàn'i D.Jay dia nihady lavaka manodidina ny tranonay ary eo izy matory amin'ny alina dia mikitroka amin'ny baolina tery foana (raha tsy hoe esoriko any an-trano izy hiara-matory amiko na dia mikororoka anaty baolina tery aza izy ary matory. akaiky ny sisiko). Rehefa misy olona mandroaka ny tokontany dia alika ny alika hafa ary mihazakazaka eraky ny fiara izy ary hihazakazaka ao ambadiky ny trano i D.Jay ary hiery mandra-pahafantany fa olona fantatsika izany na raha azo antoka ny miverina eo alohan'ny trano. Amin'ny fotoana izay vao hiverina i D.Jay ary avy eo ahetsiketsika ny rambony dia samy mifanoroka daholo. Na dia tsy midradradradra aza izy dia manana hodi-kazo hafa na mimenomenona hafa noho ny alika madio. Tenda sy avo izy io ary saika mahatsikaiky. Faly daholo isika fa nahazo alika manokana toa an'i D.Jay. Hitako fa tsy misy zavatra tsara kokoa noho ny any am-pandriana amin'ny alina miaraka am-baravarankely mihaino ny fidradradradran'ny coyotes. Feon'ny mistika toy izany. '
mix bulldog anglisy sy chihuahua
D.Jay the Coydog ( coyote / Heeler hybrid) eo amin'ny 6 volana eo ho eo
Sacchetto the Coydog (alika anatiny / coyote hybrid) dia nilaozana ary navela ho faty tao anaty gony plastika fony izy vao 2 volana. Hoy ny tompony: 'Mpivady tanora mandeha ny alikany (Afgana) any West LA nandalo harona plastika mihetsiketsika eny an-dàlana ary nanamarina izany ary nahita azy. Sacchetto dia midika hoe 'kitapo kely' amin'ny teny italiana (kitapo plastika kely matetika). Eto Los Angeles dia toa zavatra lehibe ny mitondra ny mpiandry ondrinao vavy izay mafana be hatrany amin'ny havoana Hollywood ary avelao hamatotra azy any izy mba hiaraka amin'ny coyote lahy. Izy dia manana ny maha-izy azy manontolo ny coyote - na dia tsy ny maso manindrona aza. Saro-kenatra izaitsizy izy ary saro-kenatra na iza na iza fa izaho. Ny tongony lamosina dia mandeha any amin'ny sisiny rehefa mihazakazaka izy, toy ny coyotes. Malina noho ny fantany akory izy. Tsy haiko akory ny manazava azy, fa tena manan-tsaina izy. Izaho koa dia manana Doberman izay tena marani-tsaina koa, saingy tsy misy na inona na inona raha ampitahaina amin'i Sacchetto. Mampalahelo fa toa noraisiny teo am-balahan'ny Mpiandry Alemanina izy, satria voamarina fa voan'ny aretin-tratra degenerative hip tamin'ny volana desambra lasa teo. Manampy betsaka ny acupuncture, toy izany koa ny sakafo sakafo manta izay natakaloko azy rehetra. Ny dokoterako holistic / tandrefana dia nanolo-kevitra fa noho ny coyote ao aminy dia mety hahita vokatra tsara amin'ny sakafo sakafo manta izy. Ka natodiko daholo izy ireo (manana fonosana 4 aho. '
fifangaroana lab any alika karelianina
Aiko the Coydog (Coyote / Alika mpiandry alemanina) amin'ny 7 taona— Teraka tany Texas i Aiko taorian'ny nidiran'ny coyotes sasany ary nivady tamin'ny mpiandry alemanina madio. Ireo mpiompy (nenitoan'ny vadiko sy dadatoako) dia tsy maniry ireo alika kely mifangaro ka nomeny ny coydogs, nomena anay i Aiko. Mamy tahaka ny fy izy. Mifandray tsara amin'ny alika hafa izy, nefa tsy milalao toy ny alika nentim-paharazana, ohatra, tsy maka na tsy liana amin'ny kilalao mihitsy. Tiany ny mihazakazaka manodidina ny tokontany ary manenjika ny alika 'anadahiny'. Ankafiziny ny fofona mamono olona ary mitondra 'fanomezana' ho antsika mihoatra ny alika hafa. Hanahaka ny alaona izy rehefa ataontsika izany. Misy mihitsy aza ny hira nosoratanay izay misy fidradradradrana, nampiofaninay izy hitoloko mandritra ny hira ary manomboka mierona izy raha vao manomboka ny hira! Tsara fitondran-tena izy ary tena 'dainty'. Betsaka ny olona milaza fa toy ny amboahaolo izy. Tianay be izy! '
Aiko the Coydog (Coyote / Alika mpiandry alemanina) amin'ny faha-7 taonany
'Hitanay tamin'ny famandrihana voalohany ny Axle tany South Dakota. Axle dia hoditra sy taolana avokoa kankana koa. Nentinay tany amin'ny mpitsabo biby any an-toerana izy ary nolazaina fa mety ho coydog izy satria toa mahazatra any an-toerana izany. Matahotra alika hafa i Axle fa manafana rehefa avy mitsidika vitsivitsy. Nopetahana koa ny rambony. Tena mahay mandre izy ka tsy azoko antoka raha mifangaro izy Mpiandry Alemanina na mena Heeler . Nahita sary tao amin'ity tranokalan'ny alika antsoina hoe Aiko ity izay mitovy be aminy aho, izay mpiangona coyote mpiandry alemanina. Axle no tena alika tsara indrindra azontsika, snuggler tena tsara, mahafinaritra any an-tsena. '
'Noraisiko i Lanto tamin'ny volako teo an-toerana fony izy telo volana (5 volana izy izao) ary nampahafantarina fa a Border Collie mifangaro. Telo herinandro taty aoriana vao nahamarika zavatra hafahafa momba azy aho dia niverina tany amin'ny kilao mba hanandrana hahalala bebe kokoa momba azy. Hita fa ny tompony teo aloha dia nanana vehivavy Border Collie izay nifanambady tamin'ny coyote izay efa nanadihady ny fananany nandritra ny volana maro. Na dia nahasosotra azy ireo aza ny tsy nitenenan'izy ireo ahy izany tamin'ny nananganako azy, faly aho fa afaka nanazava ny fihetsiny. Nampiahiahy olona foana i Lanto, niafina tany an-joron-trano, na impiry na impiry aho no manandrana hifanerasera izy. Midradradradra koa izy na miantso volo fa tsy mivovo. Mbola tsy naheno azy nivezivezy aho. Izy dia manana ny sofina lehibe sy maso mavo miavaka toa ny coyote izay vao tiako.
'Na eo aza ny fiheverana ratsy coyotes mahazo tsy hanome an'i Lanto ho an'izao tontolo izao aho. Izy dia be fitiavana sy manan-tsaina, marani-tsaina noho ny alika hafa rehetra nananako. Mipetraka amin'ny velaran-tany tsy misy fefy roa hektara aho ary mahay mijanona ao amin'ilay trano izy. Tiany ny mihazakazaka manenjika ny biby mpikiky kely (indraindray mitondra trano iray ary mandatsaka ny tongotro ho fanomezana ho ahy) sy ireo akoho mania mankao an-tokotany. Mila tanana mafy i Lanto saingy antenaina izany. Tsy maintsy ampahafantariko azy tsy tapaka iza no alpha , nefa mendrika ny fiezahana izy. Tiako i Coydog keliko ary manantena ny hahita azy ho lasa mpiara-miasa mandritra ny androm-piainana aho. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Coydog
Sary Coydog 1
Lisitry ny alika mifangaro Coyote
Info an'ny Coyote
shar pei afangaro amin'ny husky
pug sy alemà mpiandry ondry Mix
alika miteraka izay milanja 25 kilao
standard poodle mix dane mahafinaritra